Cricky Spice Chickpeas | Bezzia
Tavoahangy voatsipy maranitra
Maria vazquez | | legioma
Androany dia atolotray anao any Bezzia ny fomba fahandro izay azonay antoka fa ho tianao. Raha ny statistika dia izay rehetra manandrana ireo trondro maranitra maranitra no averina. Tsy izy ireo ihany a sakafo ara-pahasalamana salama ho an'ny misasakalina, dia azo ampiasaina miaraka amin'ny menaka na lovia legioma izy ireo.
Omano ny sakamalao voasarika marefo tsy misy fahasarotana io. 40 minitra amin'ny fotoanao fotsiny no ilainao amin'izany. Azonao atao ny manararaotra ny faran'ny herinandro hanamboarana azy ireo ary hitahiry ireo sisa tavela ao anaty siny tsy misy rivotra ao anaty vata fampangatsiahana hampiasa ny alatsinainy na talata.
Tavoahangy nahandro 1 (400gr)
Kininina iray sotro
Paprika 1 sotro fihinana avy any La Vera
Vovoka tongolo gasy 1/2 sotrokely
1/2 sotrokely oregano maina
Paprika mafana 1/2 sotrokely
Dipoavatra mainty 1/2 sotrokely
Afanaina hatramin'ny 210ºC ny lafaoro.
Sasao, esory ary maina miaraka amina taratasy mitroka ireo akorandriaka.
Ao anaty vilia baolina zava-manitra rehetra sy ny sipa, ary afangaro.
Avy eo atsofohy ao anaty ilay ilay sipa lafaoro lafaoro, nilaharana tamina taratasy greaseproof teo aloha. Aparitaho tsara izy ireo mba tsy hifankahazo.
Andrahoy mandritra ny 35 ka hatramin'ny 45 minitra, manala azy ireo antsasaky ny fotoana.
Avy eo avoaka ao anaty lafaoro izy ireo ary avelao izy ireo hangatsiaka amin'ny hafanan'ny efitrano.
Tehirizo ao anaty kaontenera misy vera mihodina ao anaty vata fampangatsiahana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » legioma » Tavoahangy voatsipy maranitra
Goya Awards 2019, ny alina lehibe amin'ny sinema Espaniôla
Tombony ho mpitovo